Google One VPN yave kuwanikwa, zvakare kuSpain | Linux Vakapindwa muropa
Ingori pasi pemwedzi wapfuura, pano kuLXA takadaro echo yekuuya kweMozilla VPN. Iyi sarudzo yaive nemakwikwi mutengo, asi avo vanobhadhara VPN vanowanzo sarudza dzimwe nzira. Ivo zvakare vachangobva kuburitsa yakagadzikana vhezheni ye Proton VPN ine mushandisi interface yeLinux, uye izvi zvinongojekesa chinhu chimwe chete: kune kufarira uye musika. Sokunge paive pasina sarudzo shoma, yanga ichiwanikwa kwemaawa mashoma zvakare Google Imwe VPN, asi kuwana sevhisi iyi hakuzove neyakajairwa nzira.
Sezvatinoona mukutora, kutorwa kubva Iyi link, chinyorwa chidiki chinoti «VPN inosanganisirwa muzvirongwa zve2TB kana zvimwe mune dzimwe nyika«. Naizvozvo, hatizokwanise kubvumirana neVPN zvakazvimiririra; iwe unofanirwa kuhaya Google One, uye kwete izvo chete, iwe unofanirwa kuve neinenge 2TB yekuchengetedza kondirakiti. Uye chimwezve chinhu: izvozvi, vashandisi vega veApple vanogona kushandisa Google One VPN, uye ivo vanofanirwa kumisikidza sevhisi kubva ku Google One Anwendung.
Google One VPN inosvika, asi ikozvino kune chete Android
Google inoti iri kutoshanda pane vhezheni yeIOS, iyo yeMacOS uye yeWindows, asi haisati yavapo. Vashandisi veApple vane kondirakiti ye2TB yeGoogle One vanozokwanisa kuwana yavo VPN pasina imwe mari, asi ziva kuti avo 2TB vane mutengo we € 9,99 / mwedzi kana € 99.9 / gore.
Naizvozvo, isu tinogona kutaura kuti iyi VPN ndeye "yemahara", kana zvirinani ndeyevashandisi ava vanoda yakawanda yekuchengetedza. Zvagara zvichitaurwa kuti maVPN emahara haasi akanakisa kana akachengeteka, uye Google inovimbisa kuti iyo VPN ichagara ichienda nekukurumidza kumhanya vanogona kupa. Saka pano tinofanirwa kuongorora zvimwe zvinhu, senge kuti Google inovimbwa here uye chii chichaita nedata redu rekubhurawuza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Google One VPN ikozvino yave kuwanikwa, zvakare kuSpain, asi kwete kune wese munhu
Zvinoita kunge kuseka kunoudzwa wega, "Simbisa kuchengetedzeka kwako neGoogle One."